म सुत्ने रुमको झ्यालमा प्रहार भएको छ : कुल आचार्य - Durbin Nepal News
दूरबिन नेपाल १७ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०६:३६
गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष कुल आचार्यको सानेपा स्थित घरमा आचार्य बस्ने कोठालाई नै लक्षित गरी भएको प्रहारबाट झ्यालका सिसा फुटेका छन् । प्रहरीले यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसै विषयमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष कुल आचार्यसँग दूरबिन नेपालले गरेको छोटो कुराकानी –
दूरबिन नेपाल: तपाइको घरमा आक्रमण भएको खबर सही हो ?
कुल आचार्य : हो । झ्यालमा प्रहार गरिएको रहेछ । सिसा फुटेको छ ।
दूरबिन नेपाल: कसैले प्रहार गरेर नै फुटेको हो वा अरू कुनै कारणले ?
कुल आचार्य : प्रहरीलाई खबर गरेका छौँ । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान पछि प्रहरीले नै यो कुरा बताउँदा राम्रो हुन्छ ।
दूरबिन नेपाल: आक्रमण वा प्रहार गर्न चाहनेले त तपाइलाई बाहिर पनि गर्न सक्थे होला घरमा नै प्रहार किन गरे जस्तो लाग्छ ?
कुल आचार्य: किन प्रहार भयो त्यो पनि म नै सुत्ने रुममा ? घरमा २० वटा जति झ्याल छन् । तीन तला माथिको म नै सुत्ने रुममा प्रहार गरिएको छ ।
दूरबिन नेपाल: गोली, ढुङ्गा, इँटा के प्रहार भएको छ ?
कुल आचार्य: त्यो रात म घरमा थिइन । ८६ वर्षको आमाले काम गर्ने मानिसलाई सफा गर्न लगाउनु भएछ । सिसाका टुक्रा र प्रहार गरिएको वस्तु मैले देखिन । जब मैले थाहा पाए प्रहरीलाई खबर गरेको छु । प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
दूरबिन नेपाल: तपाइ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्षको दौडमा हुनुहुन्छ कुनै फण्डा त हैन ?
कुल आचार्य: घरमा भएको प्रहार एनआरएनएको निर्वाचन र उम्मेदवारीसँग जोडेर हेर्ने कुरै हैन । सुरक्षाको विषय हो । घटनाको रिपोर्ट गराउनु त सबैको दायित्व हो नि । यसले सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई त्यस्ता व्यक्तिसम्म पुग्न सहयोग पुग्छ ।
१७ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०६:३६ मा प्रकाशित